माग सम्बोधन नहुँदासम्म आन्दोलन नरोकिने कर्मचारीको चेतावनी
काठमाडाैँ । कोरोना महामारीमा खटिएबापतको सेवा सुविधाको माग गर्दै कोभिड-१९ केन्द्रीय युनिफाइड अस्पताल (वीर अस्पताल) मा स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको आन्दोलनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो ।
अस्पतालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी डा. जागेश्वर गौतमले कर्मचारीको हकहितमा काम नगरेको भन्दै स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीले ८ महिनादेखि नपाएको कोभिड-१९ जोखिम भत्ता पाउनुपर्ने, औषधी उपचार भत्ता, सेवा विस्तार भत्ता पाउनुपर्नेलगायतका माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएका छन् । स्वास्थ्यकर्मीले अस्पताल सुधारको माग गर्दै आएका छन् । कर्मचारीले डा.गौतमले गैरकानुनी रूपमा स्वास्थ्य सामग्री प्रक्रिया अगाडि बढाएको आरोप लगाएका छन् ।
अध्यक्ष आचार्यद्वारा जारी वक्तव्यमा डा. गौतमले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा प्रहरी बोलाएर कुटपिट गरेको आरोप लगाइएको छ । ‘डा. गौतम भाग्न खोजेपछि कर्मचारीहरुले ढोका बन्द गरेर तपाईं बस्नुस् निकास निकाल्नुपर्छ भन्ने किसिमले कुरा गर्न खोज्दा उहाँले प्रहरी बोलाउनुभयो,’ वक्तव्यमा अगाडि भनिएकाे छ, ‘प्रहरी ढोका फोडेर भित्र पस्यो र महिला कर्मचारीलाई लात्तीले हानेर कुटपिट गरेको छ ।’